‘बहुत तकलिफ छ सर !’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
‘बहुत तकलिफ छ सर !’
पछिल्ला दिन नियमित तलब पाउन छाडेका छन् । कम्पनीले दिएकै कोठामा चार साथीसँग बसेका रामभरोस खानेकुरा अभावमा नुन र भात मात्र खान्छन् । ज्वरो र खोकी लागेपछि बुधबार र बिहीबार दुई दिन काममा गएनन् । भने, ‘कुनै जुगाड लगाइदिनू, नेपाल फर्किनुपर्‍यो ।’
चैत्र ७, २०७७ जनकराज सापकोटा
काठमाडौँ — २०७२ चैत अन्तिम साताको कुरा हो । महोत्तरी कलुवाबगियाका रामभरोस खत्वे रात्रिबस चढेर झिसमिसेमै काठमाडौं उत्रिएका थिए । गौशालाको धर्मशालाअघि भेट्दा उनको अनुहारमा निराशाको बाक्लो रङ पोतिएको थियो ।
साउदी अरबमा रामभरोस खत्वे र २०७३ वैशाख ४ मा रामभरोसबारे कान्तिपुरमा प्रकाशित सामग्री
एक लाख १० हजार रुपैयाँ तिरेर ‘लेबर’ काममा कतार पुगेका उनी कम्पनीले गरेको मेडिकल जाँचमा फेल भएपछि फर्किएका थिए । म्यानपावर कम्पनीको स्थानीय एजेन्टले जनकपुरमा गराइदिएको स्वास्थ्य परीक्षणमा कसरी पास भए, कसरी कतारमा गरिएको दोस्रो स्वास्थ्य परीक्षणमा फेल भए, उनले बुझ्न सकेनन् ।
रामभरोसले स्थानीय साहूबाट ३६ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको ऋणको ब्याजमिटर फनफनी घुम्न थालेपछि उनी उजुरबाजुर गर्न काठमाडौं आइपुगेका थिए । उनले पाँच दिन काठमाडौंमा दौडधुप गरे । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले अनुसन्धान सुरु गरेपछि उनलाई कतार पठाउने बत्तीसपुतलीस्थित सान म्यानपावर कम्पनी बल्लतल्ल एक लाख फिर्ता गर्न तयार भयो ।
नेपाल सरकारले २०७२ असार २१ गतेदेखि लागू हुने गरी ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ को नीतिगत निर्णय गरेको थियो । खाडीका ६ देश र मलेसियामा रोजगारीमा जाने कामदारसँग व्यवसायीले प्रवेशाज्ञा र हवाई टिकटबापत रकम लिन नपाउने र रोजगारदाता कम्पनीले सेवा तथा प्रवर्द्धन खर्च नबेहोर्ने भनेर स्पष्ट तोकिए व्यवसायीले बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म लिन पाइने निर्णय गरेको थियो । सरकारी निर्णय उल्लंघन गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि पनि म्यानपावर व्यवसायीलाई निगरानी गर्न बसेको सरकारी संयन्त्र श्रम विभागले कुनै कदम चालेन । फसेको रकमको १० हजार कम भए पनि जेनतेन पाएपछि त्यतिबेलाका महाशाखा प्रमुख एसएसपी सर्वेन्द्र खनालले रामभरोसलाई सोधेका थिए, ‘अब फेरि विदेश नै जाने कि के गर्ने ?’
उनले तनक्क तन्किएर आफ्ना दुवै कान समातेर भनेका थिए, ‘माँ कसम सर अब जाँदैन ।’
रकम बुझेर गाउँ फर्किएका रामभरोसले स्थानीय साहूलाई १० हजार बाँकी राखेर अरू रकम तिरे । सदरमुकाम जलेश्वरमा वर्षौंदेखिको रिक्सा चलाउने काम उनले फेरि सुरु गरे । दुई छोरी र दुई छोराका बाबु रामभरोसको १० धुर जग्गामा बनेको फुसको घरबाहेक सम्पत्ति थिएन ।
कतारमा कार्यरत सप्तरी, बोदेरबरसाइनका बालकिसुन मण्डलको शव मृत्यु भएको १८ दिनपछि २०७३ मंसिर ७ मा काठमाडौं आइपुग्यो । बालकिसुनका वृद्ध बाबु र श्रीमती सरो काखे छोरी च्यापेर शव लिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आएका थिए । म उनीहरूको शववाहनलाई पछ्याउँदै बोदेरबरसाइन पुगेको थिएँ । त्यही क्रममा रामभरोसलाई भेट्न महोत्तरीको जलेश्वर गएँ । दिनमा एक सय १० रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी रामभरोस रिक्सा पेलिरहेका थिए । त्यहाँ एकाध बिजुली रिक्सा र अटो चल्न थालिसकेका थिए । त्यतैतिर संकेत गरेझैं गरेर उनले भनेका थिए, ‘कमाइ नै हुँदैन, कसरी जहान केटाकेटी पाल्ने ?’
२०७३ वैशाख ४ मा रामभरोसबारे कान्तिपुरमा प्रकाशित सामग्री
रामभरोस दुःखमा कसरी फसे र कसरी उम्किए भनेर उनीबारे समाचार लेखेको करिब दुई वर्षसम्म उनीसँग नियमित संवाद हुन्थ्यो । उनले सुखदुःख साट्थे । टोलका कुरा सुनाउँथे । एक दिन अचानक रामभरोस सम्पर्कविहीन भए । उनको फोन लागेन । मलाई मधेस झर्ने समय मिलेन । गत फागुन २१ मा जनकपुर साहित्य महोत्सवको छेको पारेर जनकपुर पुगेका बेला म सोध्दै खोज्दै कलुवाबगियास्थित उनको घरमै पुगें ।
कलुवाबगियाको सानो बजार छिचोलेर धुलौटो बाटो हुँदै दक्षिण लागेपछि आउने पोखरीलाई दायाँ फन्को मारेर अघि बढ्ने सानो बाटो छेउमा बाँसले बारेको उनको घर थियो । रामभरोस घरमा थिएनन् । जेठा छोरा धीरज भने घरमै भेटिए । ६ कक्षामा पढ्ने उनी स्कुल जान छाडेको तीन महिना भएछ । उनले आफ्नै लवजमा सुनाए, ‘बुबा साउदी गएछ ।’ रामभरोस पत्नी भक्तजनले चढाएको बोकाको मासुको प्रसाद खान नजिकैको मन्दिर गएकी थिइन् । धीरजले इमोमा कल गरेर बाबु रामभरोससँग सम्पर्क गराइदिए ।
मैले माटोले लिपेको भित्तामा अडेस लागेर उनीसँग कुरा गरे । उनले एकै सासमा सुनाए, ‘एक लाख दस हजार अर्जेन्टलाई बुझाएर साउदी आएको । ६ महिनादेखि तलब पाएको छैन । बहुत तकलिफ छ ।’
मैले सोधें, ‘तपाईंले त काठमाडौंमा अब कहिल्यै विदेश जान्नँ भन्नुभएथ्यो । किन जानुभयो त ?’
उनले भने, ‘कान्छी छोरी पनि १८/१९ वर्षको भइसकी । त्यसको बिहेमा मोटरसाइकल दाइजो दिनुपर्छ । त्यही दहेजको पैसा कमाउन आएको ।’
रामभरोससँग कुरा गर्दै गर्दा उनका छिमेकी रामफल मण्डलसँग भेट भयो । मैले आफूबारे बताएपछि उनले रामभरोसको कथा लेख्ने पत्रकारका रूपमा मलाई चिने र भने, ‘रामभरोसको कथा मैले साउदीमा बसेर मोबाइलमा पढेथ्यो ।’
समाचार छापिएकाे केही महिनापछि महाेत्तरीका स्थानीय पत्रकार विक्रम राैनियारले रामभराेसकाे घरमै पुगेर खिचेकाे फाेटो
साउदीमा तीन वर्ष काम गरेर फर्केपछि केही समय घर बसेर फेरि मजदुरी गर्न श्रीलंका पुगेका रामफल केही समयअघि मात्रै श्रीलंकाको कोलम्बोबाट फर्केका रहेछन् । उनले त्यहाँ काम गरेको प्रमाण देखाउन स्क्रिन फुटेको पुरानो मोबाइलमा केही फोटो देखाए । कोलम्बोका बहुतले व्यापारिक भवनहरूका अघिल्तिर उभिएको उनको फोटो थियो । उनले पर्सबाट एक डलरको नोट देखाएर सोधे, ‘एउटा कुरा सोधौं ?’
मैले सहमतिको भाव देखाएपछि उनले भने, ‘यो डलर भन्छ । किन कागजको नोटमा छापेछ सर ?’
रामफलले करिब ४५ टोलको खत्वे टोलमा परिवारका कोही न कोही सदस्य विदेश नगएको घर एकाध मात्रै रहेको सुनाए । रामभरोससँगै केही वर्ष रिक्सा हाँकेका रामफलले साथी कर्जामा डुबेको सुनाए । उनले पनि रामभरोसले इमो संवादमा भनेझैं सुनाए, ‘कम्तीमा पनि साढे तीन लाख कर्जामा डुबेछ रामभरोस ।’ रामभरोसले इमो कुराकानीमा आफूले कर्जा लिएका दस जनाको नाम र कर्जा लिएको सबै रकम पाठ घोकेको विद्यार्थीले झैं खरखरी सुनाए । ती सबैसँग लिएको साँवा रकम मात्रै करिब तीन लाख हाराहारी थियो । जसको ब्याज पनि जोड्दा रामफलले भनेझैं साढे तीन लाख कट्ने देखिन्थ्यो ।
रामफललाई मैले ‘साउदीमा ३ वर्ष र श्रीलंकामा २ वर्ष काम गरेर कमाएको पैसाले के गर्नुभयो ?’ भनेर सोधे । उनले उता कमाएको पैसा विदेश जाँदा लागेको कर्जा तिरेको र बाँकी रकम छोरीको बिहेमा दहेजमा खर्च गरेको सुनाए । उनले भने, ‘ठूली छोरीको बिहे गर्दा लागेको करिब ५० हजार कर्जा तिर्न अझै सदाएका छैन ।’
रामभराेसका छिमेकी रामफल मण्डल श्रीलंकामा मजदुरी गरेर कमाएकाे डलर देखाउँदै
उनले गाउँका सबैजसो तन्नेरी विदेश गएको तर पैसा बचाउन पटक्कै नसकेको सुनाए । किन त ? उनले भने, ‘कर्जाको ब्याज सदाउँदा–सदाउँदै पैसा गइहाल्छ । कोहीले छोरीको बिहेमा धेरै दाइजो दिन्छ । कोहीले रमाइलो गरेर पैसा सक्छ । अनि फेरि कर्जामा डुबिहाल्छ ।’
काठमाडौं फर्केपछि रामभरोससँग इमोबाट नियमित कुराकानी भयो । त्यहींबाट मैले थाहा पाएँ, कतार जाँदा फसेको पैसा उठेपछि रामभरोसले केही महिना जलेश्वरमै रिक्सा चलाएछन् । केही महिना सडक निर्माणमा मजदुरीको काम गरेछन् । एक वर्ष जति भने नजिकैको धान, चामल र चिउरा भुट्ने मिलमा उनले मासिक १५ हजार तलबमा काम गरेछन् ।
साउदी जानुअघि उनले सीमावर्ती भारतीय गाउँ सुरसन्डका केटासँग जेठी छोरीको बिहे गरिदिएछन् । एक लाख १० हजार खर्चेर मोटरसाइकल, ९० हजारको कुर्सी पलङ र ५० हजार भारु नगदै दाइजो दिएछन । बिहेमा सबै गरेर रामभरोसले ७ लाख जति खर्चेछन् ।
उनले सुनाए, ‘दाइजो नदिई त कसैले छोरी नै लिँदैन त के गर्नु ?’
‘१५ हजार तलबको काम छाडेर किन साउदी जानुभएको ?’ मैले सोधें ।
उनले गाउँको कमाइले नुनतेल, दुई छोराको पढाई खर्च, जेठी छोरीको बिहेमा लागेको कर्जाको ब्याज तिर्न पनि गाह्रो भएको सुनाए । उनले भने, ‘जति गरे पनि कर्जा सदाउन नसकिने ! स्कुल नै नटेकेकी कान्छी छोरीको पनि बिहे गर्ने बेला भइसक्यो । अनि त कुनै उपाय भएन ।’
कर्जाको पीरले छटपटिएका बेला उनले छिमेकी गाउँ बखरीका एजेन्टको काम गर्ने भजनी ठाकुरलाई भेटेछन् । भजनीलाई एक लाख १० हजार नगदै हातमा बुझाएर उनी साउदी उडेका रहेछन् ।
कुराकानी सकिएपछि उनले आफू साउदी जाँदाका कागजात पठाइदिए । कागजातअनुसार उनी २०७५ जेठ १२ गते साउदी अरब उडेका रहेछन् । अल मसरियु नामक साउदी कम्पनीको जेद्दास्थित सडक निर्माणको परियोजनामा रामभरोस काम गर्न पुगे । उनलाई मासिक ८ सय साउदी रियाल (करिब २५ हजार रुपैयाँ) र २ सय रियाल खाना खर्च दिने काममा लगाइएको रहेछ । सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट भने पनि उनी किन एक लाख दस हजार तिर्न तयार भए ? उनले भने, ‘हामी गाउँको आदमीलाई के थाहा ? अर्जेन्टले त्यति पैसा नतिरी जान मिल्दैन भनेपछि के गर्नु त ?’ उनले म्यानपावरका स्थानीय एजेन्टलाई अर्जेन्ट भनेका थिए ।
माँ कसम रामभरोस दाइ
रामभरोसका अनुसार कम्पनीले उनलाई निर्माण क्षेत्रमा ट्वाइलेटको पानी ढलमा निकास गर्नका लागि खाल्डो खन्ने, पाइप फिट गर्ने र पिच गर्ने काम लगाएको छ । कामको सुरुवाती दिनमा कम्पनीले तलब दिए पनि पछिल्ला दिनमा उनले नियमित तलब पाउन छाडेको बताए । कम्पनीले दिएकै कोठामा अन्य चार कामदार साथीसँग बसेका रामभरोसले केही सातायता खानेकुराको अभावमा नुन र भात मात्रै खाइरहेको सुनाए । ‘बहुत तकलिफ छ सर !’ उनले भने ।
ज्वरो र खोकी आएपछि बुधबार र बिहीबार उनी दुई दिन काममा गएनन् । उनले भने, ‘कुनै जुगाड लगाइदिनु मलाई । नेपाल फर्किनुपर्‍यो ।’
रामभरोससँगै बस्ने केही साथी भने बेला–बेला स्थानीय साउदीको घरमा गएर लुकीछिपी काम गरेर केही पैसा जम्मा गर्दा रहेछन् । रामभरोससँगै काम गर्ने एकले कान्तिपुरसँग भने, ‘लुकीछिपी काम गरेको पैसाले नुन–चामल किनेर खाइरहेका छौं ।’
बाबु रामभराेसँग इमाेमा कुराकानी गर्दै जेठो छाेरा
रामभरोसका अनुसार मदिना छेउको अलहमद भन्ने ठाउँमा काम सुरु गरेपछि कम्पनीले पहिलो तलब नै तीन महिना बितेपछि दियो । त्यसपछि पनि उनीहरूले समयमै तलब पाएनन् । रामभरोसले भने, ‘कोरोनाकालभरि पनि काम लगाए । तर तलब दिएनन् ।’
सिरहाको लहान घर भएका रामभरोसका सहकर्मी स्वराज ठाकुर दनुवारको कथा पनि उनकै जस्तो रहेछ । नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण पास भइवरी एक लाख ५ हजार तिरेर मलेसिया पुगे पनि दोस्रो स्वास्थ्य परीक्षणमा फेल भएपछि तीन महिनामै उनी नेपाल फर्किएका रहेछन् । नेपाल फर्किएको तीन महिनापछि उनी गोलबजारकै एक एजेन्ट विनोद राईलाई ५५ हजार र काठमाडौंको लिंक इन्टरनेसनल प्लेसमेन्ट सर्भिस नामक म्यानपावरलाई ४५ हजार बुझाएर साउदी उडेका रहेछन् ।
कम्पनीले नियमितजसो काममा लगाए पनि तलब दिन आनाकानी गरिरहेको उनले सुनाए । ‘तलब कहिले आउँछ भनेर सोध्यो भने भोलि भन्छ । तर म्यानेजरले भनेको भोलि कहिल्यै आउन्न,’ २२ वर्षीय उनले भने । उनका अनुसार कम्पनीको उक्त साइटमा करिब ३५ नेपाली, केही पाकिस्तानी र भारतीय कामदार कार्यरत छन् । उनले भने, ‘अरू देशका कामदारले पनि तलब पाइरहेका छैनन् ।’
रामभरोसले शुक्रबारको कुराकानीमा आफूहरू चामल र नुनको भरमा कतिन्जेल बाँच्ने भन्ने टुंगो नभएको बताए । ‘दिनको एक छाक भातको भरमा बाँचिरहेका छौं,’
उनले भने, ‘दुई छाक नै खान त कहाँ पुग्छ ?’ उनले दिनभर भोलि के खाने होला भन्ने चिन्तामा आफू बाँचिरहेको बताए ।
काम गरेर पनि तलब नपाउँदा र आफू खाइनखाई बसेको थाहा पाएर घरमा श्रीमती पनि रोइरहेको सुनाउँदै उनले घरमा फोन गरेर सम्झाइदिन आग्रह गरे । ४६ वर्षीय उनले उदासी मिसिएको स्वरमा भने, ‘अहिले एक पटकलाई मेरो समस्या हल गरिदिनुस् । म अब कहिल्यै विदेश आउँदिनँ । अब त म बूढो पनि भइसकें । छोरीको सादी गर्ने चिन्ता मात्रै नभएको भए कस्सम आउँन्थेन ।’
प्रकाशित : चैत्र ७, २०७७ ०७:०९
सहिद स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल : उपाधि जित्नेमा दुवै टोली ढुक्क
चैत्र ७, २०७७ सुवास विडारी
हेटौंडा — त्रिभुवन आर्मी क्लब र मकवानपुर–११ शनिबार तेस्रो संस्करणको स्थानीय तह सहिद स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता–२०७७ को उपाधिका लागि आमनेसामने हुँदै छन् ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को वार्षिक क्यालेन्डरअनुसार मोफसलमा सुरु भएको सिजनको पहिलो नकआउट प्रतियोगिताका उपाधि जित्ने दुवै टोलीले दाबी गरेका छन् । वन विज्ञान खेलमैदानमा जारी प्रतियोगिता आफ्नो नाम लेखाउने दाउमा आर्मी रहेको छ भने साविकको विजेता मकवानपुर उपाधि रक्षा गर्ने गरी मैदानमा उत्रिँदै छ ।
फाइनलको यात्रा तय गर्ने क्रममा आर्मीले ‘ए’ डिभिजन टोली जावलाखेल र विदेशी क्लब अफ्रिकन रुट्स एसोसिएसन क्यामरुनलाई तथा आयोजकले नवजनजागृति युवा क्लब, सिमरा र लिग च्याम्पियन मछिन्द्रलाई पराजित गरेका थिए । विदेशी टोलीलाई पराजित गरेर आर्मी हौसिएको छ भने मछिन्द्रलाई पराजित गरेसँगै आफूहरूलाई उपाधि रक्षा गर्न कसैले रोक्न नसक्ने दाबी मकवानपुरको छ ।
‘हामीले यस मैदानमा दुईवटा उपाधि जितिसकेका छौं । तीनवटा फाइनल पनि खेलिसकेका छौं । हाम्रा खेलाडीहरू फाइनल खेल्नका लागि उत्साहित छन्,’ आर्मीका व्यवस्थापक चुनबहादुर थापाले भने । कप्तान तथा फरवार्ड टेकबहादुर बुढाथोकी राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा आर्मीका आठजना खेलाडी हुँदासमेत आफूहरूले फाइनल यात्रा तय गरेको कारण च्याम्पियन हुनेमा ढुक्क रहेको दाबी गर्छन् ।
आफ्ना फरवार्डहरू उच्च फर्ममा रहेका कारण यस वर्ष पनि उपाधि जित्नेमा आफू ढुक्क रहेको मकवानपुरका प्रशिक्षक विजयलाल श्रेष्ठले बताए । ‘मौसम, मैदान र दर्शक सबै हाम्रो पक्षमा रहेका छन् । त्यसकारण उपाधि जित्नेमा ढुक्क छौं ।’, उनले भने । मकवानपुरका कप्तान तथा गोलरक्षक अशोक बरालले घरेलु मैदानको फाइदा उठाउँदै च्याम्पियन बन्नेमा आफू ढुक्क रहेको दाबी गरे । ‘हामीसँग उत्कृष्ट फरवार्ड छन् । त्यसकारण सहज जित निस्किन्छ’, उनले भने ।
दुई खेलमा एकमात्र गोल गरेको आर्मीले एउटा जित टाइब्रेकरमा हात पारेको थियो । आर्मीले प्रतियोगितामा गोल भने खाएको छैन । मकवानपुरले आठ गोल गरेको छ भने चार गोल खाएको छ ।
आर्मीका फरवार्ड टेकबहादुर बुढाथोकी, आशिष शाक्यले प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरिरहेका छन् । मकवानपुरका अमीर श्रेष्ठ, रञ्जन विष्ट र विमल रानाबीच प्रतियोगितामा उत्कृष्ट तालमेल देखिएको छ । अमीर तीन गोल गर्दै प्रतियोगिताको सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीको पहिलो नम्बरमा छन् ।
आर्मीको डिफेन्डर विमल पाण्डे र दीपक गुरुङ फाइनलमा मकवानपुरका लागि बाधक हुन सक्छन् । मकवानपुरका डिफेन्डर सुरज विष्ट र कमल श्रेष्ठलाई छक्याउँदै गोल गर्न आर्मीलाई पनि सहज देखिँदैन । प्रतियोगितामा आर्मीको मिडफिल्ड बलियो देखिन्छ भने फरवार्डमा मकवानपुरका खेलाडीहरूको प्रदर्शन अब्बल रहेको छ । आर्मी टोली पूर्णरूपमा फिट छ भने आयोजकको टोलीमा केही खेलाडी घाइते छन् ।
कोरोना भाइरसको कहरपश्चात् बिस्तारै फुटबलको मौसममा सुरु भएको अवस्थामा हुन लागेको प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्छ त्यो थाहा पाउन भने अन्तिम नतिजा कुर्नुको विकल्प छैन । यस प्रतियोगिताको पहिलो संस्करणको उपाधि थ्रीस्टार क्बलले जितेको थियो ।
प्रकाशित : चैत्र ७, २०७७ ०७:०५